Kiristaanii Addunyaa Dhaloota Yessoo Kiristoo(Christmas) Ulfeeffachaa oole
Kiristaana Paakistaanitti waaqa ufii kadhatee mana amantiitii bahuutti jira.Islamabad, Pakistan, Muddee. 25, 2015.
Christmas,guyyaa Kiristaanii dhaloota Yessoo Kiristoo itti ulfeeffatu.Kaan mana amantii ufiitit kaan ammoo mana ufiitti yaahee firaa fi fiixaan qophii tana ulfeeffatu.Keessumattuu lafa Yessoo Kiristoon itti dhalate Israahel, Beetliheemitti nama kuma hedduutti bahee dhaloota kana ulfeeffate.
Itti gaafataman amantii Kaatolikii Roomaa, Pope Francis hawaasii wal dhabee garaan garagar bahe,guyyaa kana walti araaramu melee jedhe nama kuma hedduu Vaatikaan naannoo St.Piiteritit walti dhufetti hime.
Itti gaafatamaan kun ergaa afaan Laatiniin Urbi et Orbi,Roomaa fi Addunyaaf jettuun akka laftii waraana qabdu cuftii nagaa qabaattu labse.
Keessumattuu lafa Yessoo Kiristoon itti dhalate Israahel,Beetliheem keessatti nama kuma hedduutti bahee dhaloota kana ulfeeffate.Beteliheem,lafa Yessoon itti dhalate naannoo Manger Square keessatti ganna dabre Israahelii fi Paalistaayin irratti wal dhababanillee hardha qophiin tun nagumaan dhumatte.